Ubazi kahle ubungozi beSundowns uMosimane - Impempe
Ubazi kahle ubungozi beSundowns uMosimane
May 15, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi we-Al Ahly, uPitso Mosimane uke wakuvuma phakathi neviki ukuthi uyasisaba isilwane asakha eqenjini lakhe lakudala iMamelodi Sundowns. Ukusho lokhu njengoba ezobe ehleli ebhentshini le-Ahly okokuqala ebhekene neSundowns ayiphendula umshini ogaya yonke into ephambi kwawo.
La maqembu azodlala umlenze wokuqala womdlalo wesigaba sokuqala somkhumulajezi kwiCAF Champions League e-Al Salam Stadium ngoMgqibelo ngo-9 ebusuku. Wumdlalo onzima kuwo womabili lamaqembu.
“Sibhekene neqembu elinzima elinabadlali ababukhali. Kodwa ngiyakholelwa emakhonweni abadlali be-Al Ahly. Sadlala kahle eNdebeni yoMhlaba (yamaqembu) sibhekene neBayern Munich nePalmeiras.
“Siphinde sadlala kahle sibhekene neZamalek emidlalweni yethu nayo yakamuva. Lokho kungiqinisa idolo,” kusho uMosimane ngalo mdlalo obhekwe ngabomvu.
Sekuke kwavela ukuthi umsebenzi kaMosimane kwi-Ahly kungenzeka uncike ekutheni uyakwazi yini ukudlula kwiSundowns kwazise leli qembu yiyona ndebe eliyilobizela ukudlula zonke. Funda udaba lapha: https://bit.ly/3eOnkhI
“Sihlezi sidlala ngokuzikhandla nangokuzimisela, ngakho sinethemba elikhulu ukuthi sizoba nomdlalo omuhle. Abadlali banamava emidlalo ofana nalona. Isundowns isethubeni lokudla izicoco kulo mqhudelwano nakwiligi yabo le eNingizimu Afrika
“Ngiyakwazi abakwazi ukukwenza abadlali bayo, futhi sesibalungele. Esikufunayo ukuthola umphumela omuhle ngaphambi kokuhamba siye emdlalweni womlenze wesibili,” kusho uMosimane.
Into ebukeka ibanengile abaphathi be-Ahly wukuthi leli qembu lihluleke wukuqhwakela eqoqweni lalo kulandela ukuthi lathola induku kwiSimba SC yaseTanzania ezodlala neKaizer Chiefs ngawo uMgqibelo (funda la: https://bit.ly/2SUuPeH). Nokho lokhu akumkhathazi uMosimane.
“Ibhola liyagingqika. Ukuthi ufike kulesi sigaba uqede eqhulwini noma usendaweni yesibili eqoqweni lakho akusho lutho – akuqaguli okuzokwenzeka,” kuchaza yena.
Previous Previous post: Uthembisa ukuthi bazozikhandla sebebhekene neSimba ‘abangayazi kahle’ oweChiefs
Next Next post: Singaphuma nomphumela omuhle,’ kusho uZuma weChiefs